I-Marketing Analytics 101: Ngikhombise Imali! | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 30, 2008 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 16, i-2016 Douglas Karr
Ngenkathi ngibhala indatshana yeTalent Zoo ngenyanga edlule, ngabhala ngayo ukusebenzisa i-automation nokuhlanganiswa ukukhulisa nokusebenzisa amasu akho aku-inthanethi, kanye nezinkampani ezisiza amabhizinisi ukuthi azisebenzise amathuba wokumaketha.
Emizuzwini embalwa edlule, ngithunyelwe i-imeyili evela ku-Andrew Janis ka Ukubonisana kwe-Evantage ku-Whitepaper entsha abayikhiphile futhi imiphumela iyathakazelisa impela. (Amanye ama-synopsis angezansi abhalwe ngu-Andrew nge-imeyili ayithumele… bengingeke ngikwazi ukuyibiza nami!)
Umbuso Wezibalo Zokumaketha
Le Whitepaper ifingqa imiphumela yocwaningo olwenziwe yi-Evantage Consulting ukuthola umthelela we analytics emaqenjini wokumaketha nasezinhlanganweni zizonke.
Leli phepha libika ukuthi ngenkathi izinkampani zinikela ngesikhathi esiningi nangezinsizakusebenza analytics, iningi lisabhekene nenselelo yokuguqula idatha ibe isenzo. Yize ucwaningo lwalubhekiswe emadolobheni amaTwin, ngikholwa ukuthi imiphumela kungenzeka ihambisane kuyo yonke imboni.
Abathengisi abaningi banjalo ukutshala imali ngaphezulu analytics nezinsizakusebenza, kepha ukushintshela ekumaketheni okuqhutshwa yidatha akukona okwenzekayo ezinhlanganweni eziningi.
Ama-dollar wokumaketha aqala ukushintshela ngase imidiya enokulinganiswa kakhudlwana.
Kuneqembu labadlali abasezingeni eliphezulu abathathile ukumaketha okuqhutshwa idatha enhliziyweni.
Ukuphathwa kuyisihluthulelo ekwenzeni ushintsho ekuthengiseni okuqhutshwa idatha, futhi kuhamba kancane ukugibela.
Ngamafuphi, kungumbono omuhle wokumaketha… izinkampani seziqala ukusebenzisa ubuchwepheshe, zilinganise imiphumela, futhi zilungise ngokufanele. Baqala uku yithole! Ukuthengisa okuningi kufile, ukukhuphuka kokumaketha okubhekiswe kuwebhu ekugcineni kuthola umfutho.
Abathengisi beDirect and database bebelokhu bememeza lokhu iminyaka… kungikhumbuza ngeCuba Gooding eJerry McGuire ukumenza amemeze athi, "Ngibonise imali!". Umongameli wenkampani ngayinye kufanele ukuthi ameme into efanayo emnyangweni wabo wezokumaketha.
Lezi yizindaba ezinhle kubathengi nakubathengisi. Lapho abathengi bevezwa ekukhangiseni okubhekiswe kukho futhi okubaluleke ngokweqiniso, bayaphendula. Lapho abathengisi benza okulungile, bayaqaphela ukuthi umzamo unomvuzo. Uma ungasethi Ukuguqulwa imigomo, ukuqapha imiphumela nokwenza ukulungisa, umane uphonsa imicibisholo ebumnyameni.
Ungalanda i-Whitepaper ku-Marketing Analytics kusuka ku-Evantage. Kusuka kuwebhusayithi yenkampani: Kusukela ku-1999, Ukubonisana kwe-Evantage isize amabhizinisi e-e ukuthi aphumelele ngokuvumelanisa ukumaketha kwawo, ukusebenza kwawo kanye nezinto ze-IT? ngokusebenza kahle okuphezulu nokusebenza kahle.
Tags: umbala wemalievantageevantage kokubonisanangikhombise imaliiphepha elimhlopheI-Whitepaper
Ingabe amaBlog Blogs?
I-Oct 1, i-2008 ku-6: i-29 PM
Ngiyavuma ukuthi yonke into iya ngokuya ibhekiswa kakhulu. Njengoba ngiqala ibhizinisi lami futhi ngibheka izinketho zesikhangiso ngizithola ngiqapha idatha njalo. Yiziphi izikhangiso ezithola ukuchofoza ukuthi iziphi ezingazenzi. Ngemuva kwalokho ngizama ukuthola ukuthi kungani bese ngifaka ezinye ezingachofozwa engicabanga ukuthi zizocofwa.
Konke kusekelwe ekutheni imakethe yakho eqondiwe ingubani nokuthi yini empeleni abafuna ukuyibona. Abantu bebonke bayakuzonda ukukhangisa kepha ngizwa ukuthi ngoba nje sebeke bahlaselwa yizikhangiso ezingahlosiwe isikhathi eside. Uma ubeka izinto phambi kwabo abangazithola ziwusizo bazobona izikhangiso zakho njengezengeza kokuqukethwe okutholakala kusayithi lakho.